राम्रो गुणस्तरको ब्याकलिङ्क कसरी निर्माण गर्ने?
हाम्रो दिनहरूमा, वेबसाइट मालिकहरू खोज परिणाम पृष्ठमा शीर्ष पदहरूको लागि संघर्षको लागि संघर्ष गर्न बाध्य छन् किनभने प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत धेरै उच्च छ. धेरै आला सम्बन्धित साइटहरू बीच देखिने दृश्य हुन, तपाइँ विजय अनुकूलन अभियान बनाउन र एक गुणवत्ता लिङ्क प्रोफाइल सिर्जना गर्न आवश्यक छ. अन्तिम Google श्रेणी अद्यावधिकको समय देखि, यो तपाईंको साइटमा लिङ्कहरू निर्माण गर्न अलि कति गाह्रो भयो. आजकल, Google ले पूर्ण रूपमा इनबाउन्ड लिङ्कहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गर्दछ, प्रमाणपत्र वेब स्रोतबाट मात्र आउने ब्याकलिङ्कहरूको इनाम. यसैले सबै अगाडि-हेर्ने वेबमास्टर्सहरू जहाँ उच्चतम दक्षता प्राप्त गर्न ब्याकलिङ्कहरू निर्माण गर्ने बारे जान्नुपर्दछ. यस लेखमा, हामी प्रभावकारी प्रविधिहरू छलफल गर्नेछौं कि राम्रो गुणवत्ता ब्याकलिङ्कहरू र कारकहरू प्राप्त गर्नका लागि जुन तपाईले लिङ्कहरूको संख्या बढाउन मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ।.
राम्रो गुणस्तर पछाडि लिंकहरू प्राप्त गर्ने तरिका
सम्मानित वेब स्रोतबाट ब्याकलिङ्क
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक जुन आगमन लिङ्कको गुणस्तर निर्धारण गर्छ, स्रोतहरूको अधिकार हो जुन यी लिंकहरू आउँदैछन्. उदाहरणका लागि, यदि तपाईको उच्च प्राधिकरण वेब स्रोतबाट कम्तिमा धेरै ब्याकलिङ्कहरू छन् भने तपाइँले कम लिङ्कको वेबसाइटबाट धेरै इनबाउन्ड लिङ्कहरू ल्याउनुहुनेछ।. यो Google प्रतिष्ठान द्वारा यस्तो सम्मानित साइटहरु बाट सामाग्री वा आउटबाउंड लिंक को गुणवत्ता को बारे मा व्याख्या गर्न सकिन्छ. यसको अलावा, दुई गुगल रैंकिंग कारक वेब स्रोतहरु को गुणवत्ता निर्धारित गर्दछ - पृष्ठ प्राधिकरण र डोमेन प्राधिकरण. यदि वेब स्रोतमा उच्च PA र DA मेट्रिक्स छ भने, Google ले यो उच्च ईमानदारीमा SERP मा उच्च श्रेणी निर्धारण गर्नेछ. यदि तपाईंको इनबाउन्ड लिङ्कहरू यस प्रकारका साइटहरूमा देखा पर्दछ, उनीहरूले तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा धेरै गुणस्तर लिङ्कको रस ल्याउनेछन्. जाँच गर्नका लागि कि तपाईंको लिङ्कहरू प्राधिकरण वेब स्रोतहरूमा राख्छन् वा होइन, तपाइँ सिल्टल्ट वेब विश्लेषक उपकरण लागू गर्न सक्नुहुन्छ.
उच्च पीआर पृष्ठहरु
पेजरैंक (पीआर) देखि प्रत्येक वेबसाइट को रैंकिंग को मूल्यांकन को लागि बेंच मार्क को रूप मा कार्य गर्दछ Google द्वारा संकेतित. साइटमा शीर्ष स्थानहरू कम्तीमा 9पीआर छन् र प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै गुणस्तर छन्. 2012 PageRank यति प्रभावशाली छैन किनकि यो पहिले नै थियो, तर अझै पनि वेब स्रोतको गुणस्तर र प्रयोगकर्ता र उद्योग साझेदारहरूको आँखामा यसको प्रतिष्ठाको मूल्यांकनको लागि मानकको रूपमा कार्य गर्दछ।. पूर्वनिर्धारित रूपमा, विकिपीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, र त्यसमा9वा 10PR वेबसाइटहरूबाट ब्याकलिङ्कहरू तपाईंको साइट पृष्ठहरूमा धेरै गुणस्तर लिङ्क जोस ल्याउन सक्दछ।. यद्यपि, यस प्रकारका वेब स्रोतहरूबाट आगमन लिङ्क प्राप्त गर्न सजिलो छैन. तथापि, त्यहाँ केहि कठिनाई प्रविधिहरू छन् जुन तपाइँले लागू गर्न सक्नुहुनेछ (तपाइँ हाम्रो पछिल्लो लेखमा उनीहरूको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ "कसरी नि: शुल्कका लागि ब्याकलिङ्कहरू Dof लाई प्राप्त गर्ने?"). म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि नयाँ एन / ए पीआर वेबसाइटहरु या तपाईंको आला कम पीआर साइटहरु संग सम्बन्धित छैन को लागी कोशिश गर्न मा आफ्नो समय बर्बाद नहीं. तपाईले कुनै पनि सकारात्मक नतिजाहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन र पनि तपाईंको डोमेनमा Google वारनेस बढाउनेछ.
समान सामग्री पृष्ठहरु बाट ब्याकलिङ्कहरू
यदि तपाईं उच्च पीआर वेबसाइटहरूमा तपाइँको लिङ्कहरू निर्माण गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाइँ कम्तीमा सम्बन्धित साइटहरूमा कम्तीमा सम्बन्धित साइटहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ। विषय. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको ब्लग खोजी इन्जिन अनुकूलनको बारे हो भने, तपाईको लिङ्कहरू ब्लगिङ मार्केटमा प्राकृतिक रूपमा हेर्नेछन्. यदि एक ब्लग मध्य प्राधिकारी भए पनि, तपाईंको ब्याकलिङ्कहरू प्रासंगिक र गुणस्तरको रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ. यही कारणले अन्य वेबसाइटहरू वा ब्लगहरूसँग साझेदार सम्बन्ध स्थापित गर्नु अघि, तिनीहरूलाई कम्तिमा एकदम कम से कम तपाईंको उद्योगलाई निश्चित गर्नुहोस् Source .